Vatsim-pianarana Australia awards : hampiana i Afrika sy i Madagasikara | NewsMada
Vatsim-pianarana Australia awards : hampiana i Afrika sy i Madagasikara
Nozaraina, ny faran’ny herinandro teo teto an-dRenivohitra, ny fanamarinana fahavitana fiofanana momba ny harena ny an-kibon’ny tany nomen’ny oniversiten’i Queensland any Aostralia. Nanaraka izany fiofanana izany ny mpiofana 28 avy amin’ny firenena afrikanina 11 ka Malagasy ny dimy amin’ireo. Efatra herinandro ny nanarahan’izy ireo fiofanana tany Aostralia ary nofaranana nandritra ny telo herinandro izany teto Madagasikara.
Nosafidina manokana i Madagasikara namaranana ny fiofanana noho izy manan-danja eo amin’ny harena an-kibon’ny tany. Anisan’ny toerana notsidihin’ireo mpiofana ireo ny any Ambatovy, QMM any Taolagnaro, oniversiten’i Toamasina, ONE, ary nanadihady momba ny fitrandrahana madinika izy ireo. “Tsy natokana ho an’izay nianatra momba ny harena an-kibon’ny tany ihany ny vatsim-pianarana nomen’ny oniversiten’i Queensland fa misokatra ho an’ireo lalam-piofanana hafa, toy ny lalàna , tontolo iainana. Misy fifandraisana amin’ireo avokoa ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany”, hoy Rtoa Lynda Lawson, mpampianatra mpitarika ny fiofanana. Nataon’ny oniversiten’i Queensland mitovy ny zon’ny lahy sy ny vavy tamin’ny vatsim-pianarana nomeny.
“Fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy i Aostralia izao , no manampy betsaka ireo tanorantsika nanaraka ny fiofanana “, hoy kosa ny minisitra Zafilahy Ying Vah, misahana ny harena an-kibon’ny tany. Araka ireo toerana notsidihin’ny mpiofana, nanampy amin’ny traikefa efa azon’ireo izany, nifanakalozana ihany koa eo amin’ny tany samy afrikanina, manankarena amin’ny harena an-kibon’ny tany. “Tanjona ny mba hampitombo marina ny harinkarena faobe sy hitondra tombontsoa amin’ny sampana maro amin’ny firenena afrikanina ny fanarahana fiofanana toy izao amin’ny alalan’ny vatsim-pianarana omen’ny fanjakan aostralianina”, hoy Rtoa Jenny Dee, masoivoho vaovaon’i Aostralia eto Madagasikarara, miasa ao Nosy Maurice. Efa misokatra izao ny fangatahana vatsim-pianarana manaraka, Australia awards , ka antsoina ny Malagasy handray anjara amin’izany.